မြစ်ဆုံ: နှစ်နှစ်ကာကာ ပြုံးလိုက်ပါ
လူတစ်ယောက်တွင် အဝတ်အစားထက် မျက်နှာထားကပိုအရေးကြီးကြောင်းကို လူတိုင်းသိကြပေ၏။ လူရည်သန့်မှု၊ မြတ် နိုးဖွယ် အမူအရာ၊ လူကြိုက်များအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်တို့သည် ထူးကဲသောအောင်မြင်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများပင်ဖြစ် ပါသည်။ လူတို့သည်နှစ်နှစ်ကာကာ ပြုံးလိုက်သောအခါများတွင် တိမ်တိုက်များကြားမှ လထွက်လာသကဲ့သို့ပင် မျက်နှာ ကြည်လင်လာတတ်သည်။ ပြုံးလိုက်ရုံနှင့်“ခင်ဗျားကို မေတ္တာရှိပါသည်၊ခင်ဗျားဟာကျွန်တော့်ကို စိတ်ချမ်းသာစေပါသည်။ ခင်ဗျားနှင့်တွေ့ရတာ အလွန်ဝမ်းသာပါသည်” ဆိုသောစကားများကို တစ်ဘက်သားသို့ ပြောပြီးဖြစ်လေသည်။ ရင်ထဲက မပါသော အပေါ်ယံအပြုံးမျိုးမဟုတ်ပဲ ပြုံးပြခံရသူတိုင်းက ပြုံးသူ၏အလိုသို့ မလိုက်လျောပဲ မနေနိုင်သော အဖိုးတန်အပြုံး မျိုးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြုံးပြတတ်ရပေမည်။
လူများနှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် ရယ်ရယ်ပြုံးပြုံးမလုပ်ပဲ ခပ်တည်တည်ဆက်ဆံတတ်သောသူများသည် အလုပ်လုပ်ရာ၌ အောင်မြင်ရန် ခဲယဉ်းပေလိမ့်မည်။ အခြားသောသူများက သင့်ကိုရွှင်ရွှင်ပျပျ လက်ခံစကားပြောရန် အလိုရှိခဲ့သော် အခြား သူများကိုလည်းသင်သည် ရွှင်ရွှင်ပျပျ ဆက်ဆံရပေမည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင်လည်း ပြောဆို နေစဉ်တွင် မျက်နှာကို ခပ်ချိုချိုထား၍ နားထောင်ပါက စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရ၌ များစွာလွယ်ကူကြောင်း တွေ့ရပေမည်။
တစ်ဘက်သားကို အပြစ်တင်တတ်သောဝါသနာကိုလည်း ဖျောက်လိုက်ပါ။ အပြစ်တင်ရမည့်နေရာတွင် ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် အား ပေးခြင်း ကိုသုံးပါ။ ဘာအလိုရှိသည်ကိုသာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ထက် တစ်ဘက်သား၏ ယူဆချက်ဆန္ဒကို ကြိုးစားရှာ ဖွေပါ။ ထိုအလေ့အကျင့်များ စွဲမြဲလာလျှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ချမ်းသာခြင်း မိတ်ဆွေပေါများခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံလာပေ လိမ့်မည်။
ဝေဒနာပေါ်ပြီးမှ ကိုယ့်အလိုက် ကိုယ်အမူအရာ ဖြစ်ပေါ်လာဟန်ရှိသော်လည်း စင်စစ်ဝေဒနာနှင့်ကိုယ်အမူအရာတို့မှာ တစ်ချိန်တည်းဖြစ်ပေါ်ကြလေသည်။ စိတ်၏တိုက်ရိုက်ချုပ်ထိန်းမှုကို ပို၍ခံရလျက်ရှိသော ကိုယ်အမူအရာကို အကျင့်လုပ် ပေးခြင်းဖြင့် စိတ်၏ချုပ်ထိန်းခြင်းကို မခံရသောဝေဒနာကို အလိုရှိသည့်အတိုင်း ဖန်တီးနိုင်လေသည်။
“ထို့ကြောင့်စိတ်ညစ်နေသောအခါ စ်ိတ်ရွှင်လာအောင် လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းသည် အကယ်စင်စစ် ပျော်ရွှင်ဘုသကဲ့ သို့ နေထိုင်ပြောဆိုလှုပ်ရှားသွားလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ”
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်ပင် ချမ်းသာခြင်းကိုတောင့်တကြ၏။ ထိုချမ်းသာခြင်းကိုရရန် နည်းလမ်းရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူး များကို အကျင့်လုပ်ပေးရန်ပင်ဖြစ်၏။ ချမ်းသာခြင်းသည် ကိုယ်တွင်းရှိအကြောင်းများပေါ်မှာသာ တည်မြဲလျက်ရှိသည်။ ကိုယ်ပရှိအကြောင်းများပေါ်တွင် မတည်ရှိချေ။ သင့်၌ဘာရှိသည်၊ သင်ဘယ်သူဖြစ်သည်၊ ဘယ်မှာရှိသည်၊ ဘာလုပ်နေ သည် စသောအရာများသည် သင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ညစ်အောင်သော်လည်းကောင်းမပြုလုပ် နိုင်ပေ။ ထိုအရာများပေါ်တွင် သင် မည်သို့သဘောထားသည်ဆိုသော စိတ်သာလျှင်သင့်ကို ချမ်းသာအောင်၊ စိတ်ညစ် အောင် ပြုလုပ်နိုင်လေသည်။
“မည်သည့်အရာမဆို စင်စစ် ကောင်းလည်းမကောင်း၊ ဆိုးလည်းမဆိုး၊ အကောင်းနှင့်အဆိုးသည် စိတ်၏ဖန်တီးမှုမျှသာ ဖြစ်သည်” ဟု ရှိတ်စပီးယားကပြောဖူး၏။
“များစွာသောလူတို့သည် မိမိတို့စိတ်နိုင်သလောက် စိတ်ချမ်းသာကြသည်”ဟုအဗရာဟမ်လင်ကွန်းကပြောဖူးလေသည်။
ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာရှိသည့်လူတစ်ယောက်သည် နေရာတကာတွင်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကို ခံရပေလိမ့်မည်။
သင်သည်အိမ်ပြင်ထွက်တိုင်း သင်၏မေးကိုတင်း၍ ခေါင်းကိုမတ်မတ်ထားပါ။ သင့်မိတ်ဆွေများကို ပြုံး၍ နှုတ်ဆက်ပြီးလျှင် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါ။ တစ်ဘက်သားအထင်မှားမှာကို မကြောက်ပါနှင့်။ သင်၏ရန်သူများအကြောင်းကို အချိန်ကုန်ုခံ၍ မစဉ်းစားပါနှင့်တော့။ သင်လုပ်လိုသော အလုပ်ကိုသင်၏ စိတ်တွင်စွဲနေပါစေ။
ပြုံးခြင်းသည်ဘာမှ မပင်ပမ်း ၊ အလွန် တာသွား၏ ။
ပြုံးခြင်းသည် လျှပ်တပြက်ခန့်ကြာသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ထိုအပြုံးကို တစ်လက်လုံးမမေ့နိုင်။
ပြုံးခြင်းနှင့်ကင်း၍နေနိုင်လောက်အောင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူမရှိ။ ထိုပြုံးခြင်း၏ အကျိုးကို မခံစားနိုင်လောက်အောင် ဆင်းရဲ သူဟူ၍လည်းမရှိ။
ပြုံးခြင်းသည်အိမ်တွင်း၌ ချမ်းသာသုခကိုပေး၏။ အလုပ်ခွင်၌မျက်နှာပွင့်လန်း၏။ မိတ်ဆွေအချင်းချင်း၏ အထိမ်းအမှတ် လည်းဖြစ်၏၊
ပြုံးခြင်းသည် မောပန်းနေသူကို အမောပြေစေ၏။ စိတ်အားငယ်သူက်ု စိတ်အားတက်စေ၏။ဝမ်းနည်းသူကို ဝမ်းသာစေ၏။ လူတို့၏အတိဒုက္ခများကို ကုသရန်အတွက်ကောင်းဆုံးသော သဘာဝဓမ္မနည်းဖြစ်၏၊
သို့ရာတွင်ပြုံးခြင်းကို ဝယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ တောင်း၍သော်လည်းကောာင်း၊ ချေးငှား၍သော်လည်းကောင်း၊ ခိုး၍သော်လည်းကောင်း မရနိုင်။ ပေးသူက သဒါကြည်ဖြူစွာမပေးလျှင် ရသူမှာအကျိုးမထင်ချေ။
မပြုံးနိုင်လောက်အောင် ပင်ပန်းလျက်ရှိသောသူထက် ပြုံးခြင်းကိုပို၍ အလိုရှိသောသူ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုလူကြိုက် များစေလိုလျှင် နှစ်နှစ်ကာကာ ပြုံးပါ။
ဆရာဖေမြင်. ဘာသာပြန်ထားတဲ. စာလေးပါ။
Posted by မောင်မောင် at 21:54
ဟားဟား... ပြုံးနည်းတောင် တခါတည်း သင်ပေးလိုက်သေးတယ်.. ဟုတ်ကဲ့... အဲ့လိုပြုံးပါမယ်... :) :D xD
တူအောင်ပြုံးနိုင်ရင် မုန်.ကျွေးမယ်ဗျို. အစ်မဂျက်နဲ. အစ်မ ကန်ဒီ ရေ------- ဟိဟိ
တူအောင်ကြိုးစားပြီးပြုံးသွားတယ်ဗျို့ ...မုန့် ဝယ်ကျွေး...:)
ဒီကို လာလည်ရင် တစ်ကယ်ကျွေးမယ်---- :D